Antenimieram-pirenana: Ny antitra antitra ihany
mercredi, 10 juillet 2019 08:12
Efa solombavambahoaka izy tamin’ny taom-piasana 2014-2019. Tao Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania no nahavoafidy azy tamin’ny anaran’ny vovonana MAPAR.
Nirotsaka nifaninana tamin’ny anaran’ny vovonana IRD (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) indray izy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka notanterahina ny 27 mey 2019, ary voafidy hisolo vava ny vahoakan’Ambatofinandrahana indray mandritra ny taom-piasana 2019-2024. Tsy iza io fa Razanamahasoa Christine Harijaona.
Iray amin’ireo vehivavy miisa 26 voafidy ho solombavambahoaka izy, zokiolona indrindra amin’ireo vehivavy solombavambahoaka tafita ho ao Tsimbazaza ary zokiolona indrindra ihany koa amin’ireo solombavambahoaka miisa 151 mandrafitra ny Antenimieram-pirenana ho an’ny taom-piasana 2019-2024.
68 taona i Razanamahasoa Christine, teraka tamin’ny 29 jolay 1951. Mpitsara izy, ary minisitry ny Fitsarana nandritra ny tetezamita, talohan’ny nirotsahany hofidiana solombavambahoaka, ankoatra ny andraikitra ambony notanany tao amin’ny vovonana Mapar.
Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy, voafidy tamin’ny lisitra IRD tao amin’ny Distrikan’i Manjakandriana, kosa no zokiolona indrindra amin’ireo lehilahy solombavambahoaka miisa 125 voafidy farany teo. 67 taona izy ankehitriny, teraka tamin’ny 2 martsa 1952 tao Soavina Ambanitsena, Manjakandriana.
Tsaradia Marco, solombavambahoaka voafidy tamin’ny lisitra « Indépendant Idealson » tao amin’ny Distrikan’i Ampanihy Andrefana kosa no zandriolona indrindra amin’ireo solombavambahoaka miisa 151 mandrafitra ny Antenimieram-pirenena. 31 taona izy, teraka tamin’ny 13 aprily 1988.
Razanamahasoa Christine Harijaona sy Tsaradia Marco, no hitarika ny fivoriana voalohan’ny Antenimieram-pirenena ny Talata 16 jolay ho avy izao, hifidianana izay ho filohan’io andrimpanjakana mpanao lalàna io.